UMcCarthy ujabule ngokuqokelwa indondo kwiPSL - Impempe
UMcCarthy ujabule ngokuqokelwa indondo kwiPSL
UBenni McCarthy, oqeqesha AmaZulu FC, akafuni ukuzincoma yena kuphela ngomsebenzi omuhle owenziwe Usuthu kule sizini. Ukwenza kahle koSuthu sekuholele ekutheni afakwe kubaqeqeshi okuzokhethwa kubo oshaye into ecokeme ngesizini ka-2020/2021.
UMcCarthy ufike kwezwakala oSuthwini nokufakazelwa ukuthi kuyimanje luhleli endaweni yesibili kwilogi yeDStv Premiership. Lo mqeqeshi uzobanga umklomelo noMandla Ncikazi weLamontville Golden Arrows noRulani Mokwena benoManqoba Mngqithi beMamelodi Sundowns.
“Isikhathi sokuziqhenya njengeqembu, futhi sonke kumele sinconywe ngoba akuwona umsebenzi omuhle womuntu oyedwa. Umqeqeshi nguyena onconywayo uma izinto zihamba kahle kanti futhi nguye obukwa kabi uma kungasahambi kahle.
“Nokho umsebenzi siwenze ngokubambisana. Ithimba labaqeqeshi, abadlali, wonke umuntu ufake isandla ekutheni ngime phambili ngimele iqembu kulo mklomelo. Ngiyajabula futhi ngiyabonga ngethuba enginikwe lona ukuthi ngenze into engiyithandayo.
“Kumnandi kakhulu uma umsebenzi wakho ubonakala futhi uphakanyiswa,” kusho uMcCarthy. AmaZulu aphinde alahla amaphuzu ngesikhathi eshaywa yi-Orlando Pirates ngo 1-0 emdlalweni weligi e-Orlando Stadium ngoLwesine. Nokho kumele ukuthi kuyajatshulwa kuMaZulu ngempumelelo yesizini yonke yeqembu, yize ingakaphothulwa isizini.
“Ngithanda ukubongela bonke abanye abaqeqeshi, hhayi laba abaqokiwe kuphela. Umqeqeshi uManqoba Mngqithi, umqeqeshi uMandla (Ncikazi) weGolden Arrows, Rulani, umqeqeshi uSteve Komphela, igama lakhe elingabalwanga yize eyingxenye yethimba labaqeqeshi kwiSundowns.
“Ngiyababongela bonke laba baqeqeshi ngomsebenzi omuhle abawenzile isizini yonke. Ngifisela umqeqeshi ozothola umklomelo konke okuhle, uzobe umfanele. Ngithanda nokuhalalisela bonke abaqeqeshi bamanye amaqembu abangazange baqokwe.
“Siyazi ukuthi umsebenzi esiwenzayo emaqenjini nabadlali awulula neze. Kodwa siyayibamba ishisa senze konke okusemandleni… Sengathi singaqhubeka nokukhula nokuncintisana okuhle. Ngiyajabula ukuthi ngiqokiwe,” kuphetha uMcCarthy.
Previous Previous post: KUYAKHANYA: IPhantane ithole uxhaso oluzoyisiza ukusimama
Next Next post: UPitso useshiye phansi, kukhonjwa owaseKZN esikhaleni sakhe